Dowladda Somalia oo beenisay in Ciidamo lagu laayey dagaalkii Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa uu sheegay Wasiir Dubbe oo afkiisa ka dhowray dalka Eratariya in nasiib darro ay tahay in Ciidanka Xoogga dalka laga dhex raadiyo arrimo siyaasadeed, wuxuuna caddeeyay in aysan jirin Ciidamo ka dagaalamay waqooyiga dalka Itoobiya.
“Ma jiro ciidan soomaaliyeed oo Tigray ka dagaalamay iyo ciidan ay Itoobiya dowlada soomaaliya weydiisatay, wararka been abuurka ee ku tira ku teenka ee mala awaalka ee ah in Ciidan Soomaaliyeed inay ka dagaalameen Waqooyiga Itoobiay ee Tigray waa waxba kama jiraan”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda.
Isaga oo hadlaayay Wasiir Cismaan Dubbe ayaa waxaa uu tilmaamay in dadka dacaayada noocaas oo kale ah faafinaya ay ka so horjeedaan oo ay diidan yihiin in Soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo amaankeeda ay ku filnaato.
Hadalka Wasiir Dubbe ayaa ku soo aaday, iyadoo maalmihii lsoo dhaafay la sheegayay in Ciidamo Soomaali ah oo tababar u jooga Eratariya ay ka dagaalameen Gobolka Tigree-ga, uuna soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac, sidoo kalena arrintaas ay walaac iyo walbahaar ka muujiyeen waalidiin wiilashooda war iyo wacaalkooda la’aa muddooyinkii u dambeeyay.